Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo mar afraad dib u dhacday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada madaxweynaha Soomaaliya oo mar afraad dib u dhacday
December 9, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud. [Sawirka: Villa Somalia]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dib u dhacday mar afraad sababtoo ah doorashooyinka baarlamaanka ayaan wali lasoo gaba-gabeyn, sida ay sheegeen hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya.
Khamiistii, hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay isku raaceen in doorashada madaxweynaha la qaban doono 28-ka bishaan December, kadib saddex jeer oo ay dib u dhacday.
Bayaan ay ka soo-saareen hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaalida kulan ay ku yeesheen Muqdisho galinkii dambe ee Khamiista, ayay ku sheegeen in ay rajaynayaan in doorashada afhayeenka baarlamaanka la doorto 22-ka bishaan December, iyadoo tan madaxweynahana ay dhici doonto 28-ka December.
Ilaa iyo hadda 200 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 43 aqalka sare ah ayaa lasoo doortay. Aqalka hoose ayaa ka kooban 275 xildhibaan halka aqalka sare uu isna ka koobanyahay 54 xildhibaan
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa horey qorshuhu ahaa in ay dhacdo bishii lasoo dhaafay ee Agoosto, laakiin xukuumada Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dhawaan dib ugu dhigtay 30-ka bishaan November, haddana waa 28-ka December.
June 13, 2018 Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka codsaday culimada diinta in ay qeyb ka qaataan dagaalka ka dhanka ah xagjiriinta Al-Shabaab
October 11, 2017 Ugu yaraan todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay gaarigii ay la socdeen gobolka Hiiraan
December 26, 2016 Ugu yaraan labo askari oo ku dhintay dagaal Shebeellaha Dhexe ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya
Hassan Sheikh travels to Addis Ababa for IGAD summit
The U.S. and the European Union are considering imposing sanctions and taking other action against Somalia following a decision to extend the president’s mandate without an election. President Mohamed Abdullahi, also known as Farmajo, this [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa shalay oo Axad ahayd kusoo bandhigtay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, gaari Land cruiser ah oo ay ka qabsadeen Kenya. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sidoo kale soo bandhigtay [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalfadhiga golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay magaalada Garoowe. Kalfadhiga ayaa waxaa ka qeybgalay maasuliyiin katirsan dowladda oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali. Kulanka maanta oo Sabti ah [...]